Xubno ka Tirsan Baarlamaanka Somaliya, Islamarkaasna ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Nov 24, 2009 Jwxo-shiil, ONLF
“Nin baa isaga oo Maroodi carbisan cadho ka dhayaya, ay dawadii uu maroodiga marinayey indhaha ka gashay goobtiina ku indha beelay, ninkiibaa waxaa la yidhi shaygii loo sheegaba wuxuu garab dhigaa su,aal ah shaygaasi maroodi ma ka weyn yahay mise waa ka yar yahay”. Aayaan daro weyn ayaa maanta haysata magaca ururkii ONLF, oo kolka aan xusuusto ay ilmo i qabto, dhibaata kasta oo ka dhex dhacda ururada isku haysta Somaliya, waxaa la yidhaahdaa ONLF ayaa ku jirta. Tolow dadku maxay ogg yihiin?
Waxaa ka dhacda dalalka reer galbeedka shirar aan la ogayn ujeedo ay lee yihiin oo todobaad walba la qabto, ujeedadu waa lacag urursi, shirarkaas waxaa qabta Jaaliyadahada Jamhuuriyada burbursan ee dalka Somaliya, badi dadka tagaana waa Ogaden, waxaana lagu qabtaa magaca Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. ONLF waxay aaminsanayd in dhulkan Ogaden aanu ahayn mid ay sheegan karaan dadka Jamhuuriyada Somaliya, Itobiyana ay tahay mid laga xoraynay, arintan oo ay horeba ugula eedowday ummada Somalida ee degan dhulka Somalida Ogadeniya “war jabhada O-da ka reeba oo aynaan kala xigsan”, .
In badan ayey xukuumadihii kala gadisnaa ee Somaliya u dagaalameen in ay ka hantaan Itobiya dhulka Somalida Ogadeeniya, dhibaatooyin badana way ka soo gaadheen, laakiin waxay arintu noqotay 1984 dameer ceel ku dhacday kooy kooy ma lagu dayey. Waxaana abuurmay dhalinyar la timid wax ka gadisan wixii hore u jiri jiray, waxayna aamineen wax ka gadisan arimihii hore u jiray oo runtii ay cid waliba isu soo taagi kartay, oo ahay xaqluhu waa in uu u dhintaa dhulkiisa, xitaa Itobiya arintaas fagaarayaalka lagu gorfeeyo colaadaha gabalada geeska afrika waa laggaga gar heli jiray.
ONLF, siyaasadeedii waxay budo caydhiin ku darsan tahay, ka dib kolkii Jwxo-shiil hogaan Jabhadeed laga dhigtay, waayo ma aha nin la qarin karay waa Janaraal Somaliyeed, arintii ONLF, waxay u ekaatay qabyaalad, waxaana rumoobay shakigii ay qabeen dadka Somalida ah ee gabalka degan, markii ay ONLF u furaatay nin kasta oo Ogadeen ah ayna ka xidhnaatay dadka kale. Dhab waxaa ah in aan Moorgan oo ah nin ku dhashay Wardher aan dadka Ogadeenka ah lagu karayn in uu madax ka noqdo ururka ONLF, Maxamed Cumar Cismaana [Jwxo-shiil] way ogolaadeen.
Faroole ayaa dhawr todobaad ka hor yidhi “Ogaden iyo NFD Somali ma ah”, maalintii xigtayna waxaa uu la fadhiyey wasiir ka socda Jamhuuriyada Somaliya oo ka yimid dhulka Ogaden. Bal amuurtan idinku dhawra, Jwxo-shiil ayaa la weydiiyey dhalashadaadu maxay tahay horta waa lagu garan la yahaye, kolkaas ayuu yidhi “waxaan ahay Somaliya”, sheekadu waxay u eg tahay “ina huriyaay xaajadeenu waa isku dhoobo walaaq”.
Waxaa uu wareer badan haystaa dad aad u badan oo u dhashay qabiilka Ogaden, oo iyaga oo aan garanaynin mabaa,iida aas aasiga ah ee ururka ONLF, arkay uun ONLF oo shaqaynaysa is yidhina lagaamaba xigo kol hayday Ogaden ku jirto, dadkaas oo uu ugu horeeyo Jwxo-shiil, kolkaas umabay dhinac ka raaceen, sidaasina waxaa ku bilowday qas iyo qabyaalada isugu soo ururtay beesha Ogaden. Hadab aaway Jabhadii ONLF? mooji dad kaa badan iyo biyo kaa badaniba way ku hafiyaan.
“ONLF, waa urur u halgama dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaana ka mid noqon kara ruux kasta oo ku dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya, oo aan masuuliyad weyn ka qaban dalalka dariska, aaminsana mabaadiida aas aasiga ah ee ururka ONLF, xitaa hadii uu axmaar yahay”, qodobkaas Jwxo-shiil iyo Morgan isku si ayuu u qaban.
Waxaa dhab ah oo aan been ahayn markhaatina loo hayaa in ay jiraan dad badan oo ka tirsan baarlamaanka ku meel gaadhka ah ee Somaliya, oo todobaad walba shirar ku qabta magaca ururka ONLF, idinku badin maayo wadana ceebayn maayo, Faarax Daahir Afey waa xubin baarlamaani ah oo Somali ah, isla markaasna ahaa wasiir dawladii Maxamed Siyaad Bare, isla markaasna waa xubin ka mid ah golaha dhexe ee kooxda Jwxo-shiil ee ONLF bi,isay.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ku indho beelay ama ku indho furtay iyada oo la lee yahay, ONLF ha guulaysato, Ogadeeniya ha xorowdo, waxay garanayaan oo kaliya calanka iyo calaamada meel kasta oo shir lagu qabtana way tagi Jiib ku jabhadna dhaanto wuu jiibin. Jabhad ceebays meel walba waa taagan yahay.
FG, Somalida Ogadeeniya waxaan xusuusinayaa in ayna shir walba iska tagin ruux kastan ayna iska raacin, sababta oo ah wareer badan baa jira Jabhada ONLF, waxay sugaysaa in ay kala miirmaan biyaha dhoobada ah iyo xareedu, waayo waxaa la kala garan la yahay, ka saxda ah iyo kuwa danaha gaarka ah wata ee ay kowga ka yihiin Jwxo-shiil, Ina dhuubo, Qaaxo iyo Abtidoon. Waxaana la qaban doonaa marka ay munaasab noqoto kulan sixid ah, inta ka horeysa waxaa socda sidii Jwxo-shiil iyo dhibaatooyinka uu ku abuuray halganka loo dhiraan dhiri lahaa, wayna socotaa, ka qayb qaadashadeedana waxaa looga fadhiyaa wax garadka iyo Aqoon yahanka.
Dan gaar ah kuwa ay wado way iska tagi doonaan, dambiilaha ummada Ogadeeniya ayaa abaal marin doonta iyaga oo aan lagu xad gudbin.